ခြေဥပြင်ဖို့ ဂွင်ဆင်စို့ Opportunity | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » 2010/2012/2015 Election » ခြေဥပြင်ဖို့ ဂွင်ဆင်စို့ Opportunity
ခြေဥပြင်ဖို့ ဂွင်ဆင်စို့ Opportunity
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Sep 8, 2014 in 2010/2012/2015 Election, Opinions & Discussion | 12 comments
၂၀၁၄ သန်းကောင်စာရင်း လူဦးရေနဲ့ ၂၀၁၀ခုနှစ် ရွေးဂေါက်ပွဲ လူဦးရေစာရင်း ၈သန်းနီးပါးကွာလို့ ပြည်တွင်း၊ နိုင်ငံတဂါ သတင်းတွေမှာ အတော်လေး ရိုက်ခတ်သွားတယ်။ အခုလည်း ဒီချုပ် အမတ်တဦးက လွှတ်တော်ထဲ မေးခွန်းထုတ် ဦးမယ်ဆိုဗဲ။ ဆင်ခြေ ပြမှာပဲ ဘာပုလို့ ညာပုလို့… ဒါကို အခွင့်အရေးလို့ မြင်ကြည့်ရအောင်..။
အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း ၂၀၀၈ခုနှစ် နာဂစ်အခြေခံ ဥပဒေကို လူထုအများစု ထောက်ခံတယ် ကြောက်ဖွတ်များ ဖင်ပိတ်ငြင်းတယ်။ ဒီမိုကရက်များဖက်ကလည်း ဘွားဒေါ်ဂျီးကိုယ်တိုင် လွှတ်တော်တက် ကျမ်းကျိန်ထားတော့ အပြောရခက်နေတယ်။ ခုတော့ နတ်ဒေဝါများတန်ခိုးနဲ့ အခွင့်အရေး ပေါ်လာပြီ။ ကွဟနေတဲ့ လူဦးရေရှစ်သန်း ဘယ်မှာလဲ.. နည်းနည်းနောနော ပမာဏ မဟုတ်နော်။ စစ်တပ်အနေနဲ့လည်း ကိုယ်လွန်ထားတာ နှုတ်မရ ဖြစ်တယ်ဆိုလျင် ဒါ အခွင့်ကောင်းပဲ။ အခြေဂံဥပဒေ ခုံရုံးကနေ ၂၀၀၈ နာဂစ်ဥပဒေကို တရားမဝင်ကြောင်း ကြေငြာပြီး အခြေခံဥပဒေ အသစ်ရေးဆွဲနိုင်တယ်… အဲလိုဖြစ်ဖို့က အိမ်မက်မို့.. လမ်းတခုအဖြစ်သာ ချပြတာ။
လုပ်ရမှာ ဒီမိုကရက်များဖက်က ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ထောက်ပြတောင်းဆိုရမည်။ ဘွားတော်ဂျီးမှာလဲ တာဝန်ရှိတယ်.. သူ့ အတွက် ပြန်ပြင်ဖို့ အခါကောင်းပါပဲ။ လူဦးရေစာရင်း ကွာဟမှုနဲ့အတူ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ မလုပ်ဖြစ်ဆိုဒေါ့ ဖြစ်နိုင်တာ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ခါမှ အဲဒီမဲဆန္ဒနယ်တွေမှာ စာရင်းလိမ်ထားတာ ဘူးပေါ်သလို ပေါ်မှာမို့များလား။ ဒါလည်း အများကြီး ဖြစ်နိုင်တယ်။ စစ်အစိုးမရ တဖြစ်လဲ စစ်တဗိုင်းအစိုးမရမှာ ဖြေရှင်းဖို့ တာဝန်ရှိနေပြီ..။ အဲဒေါ့ကာ…..
အတိုက်အခံများအတွက် ခြေဥပြင်ရေးမှာ အရေးကြီးတဲ့ သက်သေအထောက်အထားမို့ ယူသင့်ယူထိုက်တာ ယူဓာတ်ကျပါလို့ သဂျီးသမက် အကျွန်ုပ်ကြောင်ကြီး ဒီနေရာမှ ပြတ်ပြတ်သားသား တိုက်တွန်းပါဒယ်။။ ငါကွ…
၂၀၀၈ မေလ မြန်မာ့လူဦးရေ = ၅၇၅၀၄၃၆၈ ဦး ( ၅၇သန်းငါးသိန်းကျော်)
၂၀၁၄ မတ်လ မြန်မာ့လူဦးရေ = ၅၁၄၁၉၄၂၀ ဦး ( ၅၁သန်း၎သိန်းကျော်)
နာဂစ်ခြေဥဟာ.. ၂၀၂၀မတိုင်ခင်မှာ ပျက်မယ့်သဘောရှိပါတယ်..။
ဦးမာမွတ် ခီဗျားမသိလျင် ဝင်မရှည်နဲ့.. ဟောသမှာ အလဲဗင်းဂျာနယ်ပါ စာတပိုဒ်…
၂၀၁၄ ခုနှစ် သြဂုတ် ၃၀ ရက်က မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ရှေ့ပြေးလူဦးရေစာရင်းဟာ ၅၁၄၁၉၄၂၀ ဦးရှိတယ်လို့ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ပြည်သူတွေကြားထဲမှာ သံသယဂယက် ရိုက်သွားခဲ့တယ်။
၂၀၀၈ မှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူဦးရေဟာ ၅၈ သန်းနီးပါးရှိတယ်။ ၂၀၁၀ မှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူဦးရေသည် အနီးစပ်ဆုံး ၅၉ သန်းဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့ နိုင်ငံတော်က ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
ဒီစာရင်းအရဆိုရင် လေးနှစ်လောက်အတွင်းမှာ လူဦးရေရှစ်သန်းလောက် ပျောက်သွားတဲ့သဘောပါ။ တစ်နှစ် လူဦးရေနှစ်သန်းနှုန်း လျော့ကျသွားသလို ဖြစ်နေပါပြီ။
အဲဒီအတွက်လည်း ပြည်သူတွေကြားမှာ မေးခွန်းတွေမြောက်မြားစွာ ပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်စဉ် ပြည်ပထွက်တဲ့ လူဦးရေ သန်းနဲ့ချီလို့လား၊ ၂၀၁၀ တုန်းက ထုတ်ပြန်ခဲ့တာ အမှားကြီးလား၊ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကြီးကို ထောက်ခံခဲ့တဲ့ လူဦးရေစာရင်းက အတုကြီးလား၊ ဒါမှမဟုတ် အခု ထုတ်ပြန်တဲ့စာရင်းက မှားယွင်းနေတာလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းပေါင်းများစွာ ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ – See more at: http://www.news-eleven.com/politic/%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%9C%E1%80%AF%E1%80%B6%E1%80%B8%E1%80%80-%E1%80%B1%E1%80%99%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%94%E1%81%BE%E1%80%80%E1%81%BF%E1%80%95%E1%80%AE-%E1%80%A5%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%81%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%9B%E1%80%AE#sthash.vj5BhvQW.dpuf
“တစ်နှစ်လူဦးရေနှစ်သန်းနှုန်း လျော့ကျသွားသလို ဖြစ်နေပါပြီ။”
ပြောရင်း.. ရေးရင်း.. ကားသွားတဲ့.. အစကနေကားတဲ့.. စ,ကားပဲ..
သင်္ချာတွက်ချက်အရ.. ၅နှစ်နဲ့..၁၀လထဲ.. လူဦးရေကွားခြားချက်…
၆၀၈၄၉၄၈ ယောက်… တိတိရှိသဗျ…။
လွန်ရော.. တနှစ် ၁သန်းနှုန်းလောက်လျှော့သွားတယ်ဆိုနိုင်တာပေါ့…။
တနှစ်.. ၁သန်းနဲ့.. ၂သန်း.. တော်တော်ကွာသဗျ….နော…။ ၂ဆတောင်….။
ဒါက.. အစိုးရဆိုသူတွေထုတ်ထားတဲ့.. သတင်းစာဆိုတာကြီးကနေတိတိကျကျတွက်ပြတာဖြစ်ကြောင်း…။
အဲလိုနဲ့.. လေသင်္ချေကမ္ဘာ၁သိန်းကြီးထွက်လာတယ်… လို့… ထင်..။
၈ သန်းတဲ့ ၁ % မကဘူး
၁% ရရင် လွတ်တော်အမတ်တွေကို ဖြုတ်ချဖို့ ဘေပြည့်တယ်မဟုတ်ဘူးလား
ရွေးကောက်ပွဲကြီးတုံးက အနိုင်ရလွှတ်တော်အမတ်တွေကို အယုံအကြည်မရှိအဆိုတင်သွင်းပါ
ေ- -ိုးမ အစိုးရ
မှတ်ချက်။ ။I am ကြားလူ။
ယူအက်စ်မှာ.. ၂၀၁၀က သန်းခေါင်စာရင်းကောက်တော့.. မြန်မာတွေစာရင်းထွက်အောင်.. US census bureau မှာကူလုပ်ဖူးတယ်..။
သန်းကောင်စာရင်းဟာ တိုင်းပြည်အတွက် သေလောက်အောင်အေ၇းကြီးသဗျ…။
ကြီးဆို.. ဖယ်ဒရယ်က.. ပြည်နယ်တွေကို.. ငွေချပေးရင်.. လူခေါင်းတခေါင်း တနှစ်.. ဒေါ်လာ ၁သောင်းနှုန်းနဲ့.. အကြမ်းချတွက်ရတာကိုး.။.
မြန်မာ့လူဦးရေတိုးနှုန်းကို.. ၁၉၈၃က.. လူဦးရေတိုးနှုန်း.. ၃.၄နှုန်းနဲ့တွက်ပုံရပါတယ်..
အဲဒီအတိုင်းသွားရင်.. တကယ်က.. ၂၀၁၄မှာ.. ၆၁သန်းရှိနေရမယ်ဆိုပါတယ်…။
အဲဒါဟာ… နိုင်ငံရေးအချက်မဟုတ်..။ တိုင်းပြည်ပြသနာ.. အမျိုးသားရေးပြသနာကြီးဖြစ်ပါကြောင်း….။
မှတ်ချက်။ ။ ရခိုင်မှာ.. လူ၃သန်းရှိတယ်..။ ၁သန်းက ဘင်္ဂလီ..။ ဘာလုပ်ကြမလဲ..
ရန်ကုန်တိုင်းမှာ.. လူ ၇သန်းနေတယ်..။ ဘယ်လိုလာပြွတ်နေကြသလည်း..။
အနိစ္စ…။ ဒုက္ခ…။ အနတ္တ…။
မှတ်ထားကွ လူတွေ သန်းနဲ့ချီလျော့နေတာ ကြောင်က စစ်တမ်းကောက်ရတယ်လို့
ဘယ်တုန်းက များ သူတို့က အရှက်ရှိလို့တုန်း
ဒီလောက်လေး လိမ်တာ ဘာဟုတ်သေးလို့တုန်း
ဦးနှောက်က အဆံမပါဘူး ပြောရအောင်လည်း ကျပ်မပြည့်တာ မဟုတ်လောက်ဖူး ၅ မတ်ဖြစ်နေတာ ဖြစ်မယ်